Send money from Korea to Myanmar | Gmoneytrans
ကျွန်ုပ်တို့ GmoneyTrans သည် နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ထိပ်တန်းငွေလွှဲပါတနာများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာသို့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ချစ်ရသူများထံသို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ငွေလွှဲပို့ပေးနိုင်ပါသည်။
သင်၏ငွေရေး‌ကြေးရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် GmoneyPay အကောင့်သည် တစ်ခုတည်းသော ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါသည်။ သင်ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေ လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲပြီး သင်ချစ်ရတဲ့ မိသားစုထံသို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ငွေလွှဲပို့ပေးနိုင်ပါသည်။
GmoneyTrans အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ စရန်ငွေထည့်သွင်းနိုင်ပြီး သင်ငွေလိုအပ်သည့်အခါ မည်သည့်စတိုးဆိုင် ATM တွင်မဆို ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
GmoneyTrans အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ သင် ၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများထံသို့ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ငွေပို့ခြင်းအချိန်ဇယားလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။
GmoneyTrans ကို အသုံးပြု၍ ကိုရီးယားပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပတွင်ရှိသော သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုထံသို့ လွယ်ကူစွာ ငွေလွှဲပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
GmoneyTrans အကောင့်ကို အသုံးပြု၍ သင့်၏လစာရရှိမှုနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းရှိ သင့်သူငယ်ချင်းများထံမှ ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံခြားမှငွေလက်ခံခြင်းများအတွက်လည်း GmoneyTrans အကောင့်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မိတ်ဆွေ၏ဘဝပျော်ရွှင်ဖို့ရန်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ရန် ကျန်ုပ်တို့ GmoneyTrans က မိတ်ဆွေကို ကူညီဖို့ရာ အမြဲအဆင့်သင့်ပါ။
လုံခြုံစိတ်ချရသော ကျန်ုပ်တို့၏ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ငွေလွှဲပြီးနောက် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သင်၏ ငွေလွှဲမှတ်တမ်းအား ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
မိမိကိုယ်ကို မိခင်နိုင်ငံရောက်နေသလိုပင် ခံစားကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မန်နေဂျာများက သင်၏မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် ပြောဆိုကာ ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
မိမိတို့၏ စပ်တူလုပ်ငန်းရှင်များမှာ ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းဘဏ်များဖြစ်တဲ့အပြင် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ငွေကြေးပေးချေမှုများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
GmoneyTrans ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကို နိုင်ငံတကာမှ သုံးစွဲသူများ၏ အတွေ့အကြုံဝေငှမှုများကို ဖတ်ရှုပေးခြင်းဖြင့်လည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
“ I have been using GmoneyTrans since2years to make regular remittance back home. It’s fast, secured, and cheap. Due to its Auto Debit feature i don’t need to visit branch, ATM or transfer to another account”